मुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् । पछुताउनु पर्ला ! – Nepal Online Khabar
मुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् । पछुताउनु पर्ला !
April 8, 2021 876
काठमाडौ : मुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् फेरि पछुताउनु पर्ला । मुला प्राय हरेकको भान्सामा रहने तरकारी हो । कहिले सलादको रुपमा कहिले अचार त कहिले मुलाको परौठा र तरकारी समेत बनाएर खाने गरिन्छ ।
यति मात्रै होइन मुला सेवनले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउने आम विश्वास पनि छ । तर कतिपय तरकारी र फलफूलसँगै मुला खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी पुग्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । निम्न उल्लेखित तरकारी, फलफुलसँगै मुला नखान चिकित्सकहरूको सु’झाव छ ।
करेला :- करेला र मुलालाई कहिल्यै पनि सँगै नखान चिकित्सक तथा अनुशन्धाताहरूको सुझाब छ । यी दुई फलफुलमा पाइने प्रा’कृतिक तत्वको रियाक्सनले मानव शरीरमा ग’म्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ । मुला र करेलासँगै सेवन गरेमा श्वासप्रश्वास र मु’टुसम्बन्धी रो’ग बढ्ने अध्ययन रि’र्पोटहरूमा उल्लेख छ ।
सुन्तला :- मुलासँग सुन्तलाको सेवन पनि हानि’कार मानिन्छ । अनुशन्धाताहरूले सुन्तला र मुलाको मिश्रणबाट विष उत्पन्न हुने चेता’वनी दिएका छन् । यी दुईबाट निस्कने तत्वले पेटसँग सम्बन्धीत मात्रै होइन शरीरका अन्य भागमा पनि गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
भुलेर पनि फेरि तताएर न`खानुहोस् यी खानेकुरा, बि’ष सरह बन्छ !
व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खा न्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएप छि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हा’नि गर्छ ? त्यसो भए, जान्नुहोस्, कुन–कुन खाना फेरि तताएर खान मिल्दैन ।
१. आलु : आलुलाई दोहो¥र्याएर तताएमा त्यसमा भएको सबै पोषक तत्व नास भएर जान्छ । यस्तो अवस्थामा तपाई आलु खाएर पेट त भर्नुहुन्छ, तर कुनै ‘पोषक तत्व पाउनुहुन्न । यतिमात्रै होइन यसले तपाईको शरीरलाई पनि असर गर्छ । २. चामल (भात) : काँचो चामलमा कि’टाणु हुन्छन् र पा केप छि ति सबै मरेर जान्छन् ।
तर, पाकेको चामल सेलाएपछि फेरि बढ्न थाल्छन् र फेरि तताएपनि मर्दैनन् । त्यसैले, भा त पाकेपछि ताजै खानेगर्नुहोस् ।३.पालुंगो साग : पालुंगोको सागलाई पनि दोहो¥र्याएर तताए मा यसमा भएको सबै पो’षक तत्व नास भएर जान्छ । त्यसै ले दोहो¥र्याएर तताएर नखानुहोस् ।
४.मासु : कुनै पनि प्रकारको मासुजन्य खानेकुरालाई तताएर खान हुँदैन । यसो गरेमा बिष बन्छ र तपाई बिरामी पर्न स क्नुहुन्छ । ५.च्याउ : च्याउलाई कहिल्यै दोहो¥र्याएर तताएर खाने नग र्नुहोस् । यसो गर्नु तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानि’कारक हुन्छ ।
वास्तुशास्त्र अनुसार जसले यी उपाय अनुसार घरमा लक्ष्मी भि¥त्र्याउँछन् उनिहरुकाे खुल्नेछ समृ’द्धिको बाटो, एक पटक अवश्य पढ्नुहाेला । शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि वास्तुशास्त्रमा अनेकौं उपाय सुझाइएका छन् । यीमध्ये यहाँ दिइएका उपाय अपनाए मात्र पनि तपाईंको भाग्य चम्किन्छ ।
क) प’र्खालको मोटाइ:- घरको दक्षिण र पश्चिमतर्फका पर्खाल उत्तर र पूर्वतर्फका पर्खालभन्दा अग्ला र मोटा हुनुपर्छ । सडकभन्दा अग्लो हुनुपर्छ जमिन स् घर बनाउनलाई जमिन किन्दा वरपरको सडकभन्दा अग्लो भएको सुनिश्चित गरेर मात्र किन्नुहोस् । सडकभन्दा होचो जमिनमा घर बनाउँदा आर्थिक संकट आउँछ ।
ख)दक्षिण पश्चिममा अग्ला रुख:- घरमा समृद्धि ल्याउनुछ भने दक्षिण पश्चिम दिशामा अग्ला रुख लगाउनुस् । यी रुखले आर्थिक स्थिरता ल्याउँछन् । यिनले दुर्भाग्यलाई हटाउँछन् र परिवारमा संकटलाई पनि ढिम्किन दिँदैनन् । ग) घरको बीच भाग खालि राख्ने:- घरको बीचको भाग सधैं खालि राख्नुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि निर्माण गर्नुहुँदैन । यहाँ केही बनाउनै परे मन्दिर बनाउनुस् । यो भागलाई ब्र’ह्मस्थान मानिन्छ ।
छ) मुख्यद्वा’रको सजावट:- घरमा समृद्धि ल्याउन घरको मुख्यद्वारलाई राम्ररी सजाउनुपर्छ । घरमा नम्बर प्लेट राख्नु पनि जरुरी छ । अनि यो भाग उज्यालो र रंगीन हुनुपर्छ । ज) चराहरूलाई दानापानी दिन डुँड:- घरको एक भागमा डुँड बनाएर चराहरूलाई दानापानी राख्नुभयो भने सका’रात्मक ऊर्जा र धन प्राप्ति हुन्छ । -इन्फो नेपाल
Prevराष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो शिवश्री हाइड्रोले उत्पादन गरेको बिजुली !
Nextपत्थरीको लागी घरायसी औषधी आफ्नै घर मा यस्तो छ, प्रयोग गर्ने तरिका सहित ।
प्रदेश २ प्रमुख राजेश अहिराजले गर्न थाले कमाल, चौतर्फी वाहीवाही !
नेता कमल थापा भन्नुहुन्छ : संघीयता अवश्यक छैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो, प्रदेश खा’रेज गरौँ…हेर्नुहोस् ।
बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा छानबिन गरौँ म तयार छु के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ? बाबुराम भट्टराई